Igwe igwe quad nke Samsung Galaxy F62 ga - abu 64 MP | Gam akporosis
Releasebọchị mwepụta nke Samsung Galaxy F62 Anyị kpughere ya ụbọchị ole na ole gara aga. Ọ bụ Febụwarị 15 mgbe anyị ga-ezute gị, mana tupu ụbọchị ahụ abịarute, anyị nwere ụfọdụ nkọwa gbasara njirimara na njirimara teknụzụ.
Ihe ohuru nke ekpughere ugbu a nwere ihe jikọrọ ya na isi ihe mmetụta nke ngwaọrụ ahụ ga - etu ọnụ, nke bụ 64 MP. Nke a, dịka anyị kwurula, ga-ejikọta ya na usoro akụkụ anọ.
Igwefoto kachasị nke Samsung Galaxy F62 agaghị abụ 108 MP, mana 64 MP
Ekwuru ya na mbụ ihe mmetụta foto nke smartphone nwere ike ịbụ mkpebi 108 MP, mana ọ dị ka ozi a ezighi ezi. Otú ọ dị, na leaked ọmụma na-egosi na ihe mmetụta bụ 64 MP Ọ naghị abịa site na Samsung, ya mere ekwenyebeghị nke a.
A na-atụ anya ka modulu igwefoto dị ka ndị a: 64 megapixels (isi) + 12 megapixels (oghere nkuku obosara) + 5 megapixels (nnukwu) + 5 megapixels (omimi - bokeh). Igwefoto n'ihu ga-abụ 32 MP ma nọrọ na ọkwa dị na ihuenyo ahụ, agbanyeghị na ekwuru na ekwentị nwere ike inwe oghere na ya.
Ihe ndị ọzọ dị na atụmatụ teknụzụ nke Samsung Galaxy F62 kwuru ihuenyo na FullHD + mkpebi nke 2.400 x 1.080 pikselụ nwere akụkụ akụkụ nke 20: 9 na teknụzụ Super AMOLED. Ihe nrịba ama nke nke a ga-abụ sentimita 6.7.
Banyere chipset mobile processor, nke a ga-abụ 7 nm. Karịrị nchegbu, ọ bụ kwuru na Exynos 9825SoC nke kwadoro ihe ngosi nke Galaxy Note 10 bụ nke Galaxy F62 ga-enwe n'okpuru mkpuchi. Na nke a, anyị ga-agbakwunye 8 GB nke Ram, 128 GB nke ebe nchekwa dị n'ime, batrị mAh 7.000 mAh nwere ikikere 25 W na gam akporo 10 n'okpuru akwa nhazi UI 3.1.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » N'ime ụbọchị ole na ole, a ga - arụ ọrụ Galaxy F62: ọ ga - abata na igwefoto 64 MP na batrị 7000 mAh